Football Khabar » भान डाइकका लागि बार्सिलोना र रियल मड्रिड भिड्ने !
भान डाइकका लागि बार्सिलोना र रियल मड्रिड भिड्ने !
सिजन २०१८–१९ मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर वर्ष २०१९ का लागि व्यक्तिगत ठूला अवार्डमा प्रमुख दाबेदार बनेका इंग्लिस क्लब लिभरपुलका डच सेन्टर डिफेन्डर भर्जिल भान डाइकमाथि स्पेनका दुई ठूला क्लबहरूले आँखा लगाएका छन् । गत सिजन लिभरपुलले युरोपियन च्याम्पियन्स लिग जित्दा टोलीका प्रमुख सदस्य रहेका भान डाइकलाई बार्सिलोना र रियल मड्रिड दुवैले अनुबन्धका लागि योजना बनाउन थालेको स्पेनिस सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
बार्सिलोनाका प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डे तेस्रो सिजन बिताइरहँदा युरोपियन प्रतियोगिताको असफलताका कारण चर्को दबाबमा छन् । यो सिजन पनि ठूला उपाधि जित्न नसके उनको भविष्य क्याम्प नोउमा सुरक्षित छैन । यदि यो सिजन पनि बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिग जित्न नसके आगामी समरमा बार्सिलोनाले रक्षापंक्तिमा प्रमुख डिफेन्डरका रूपमा भान डाइकलाई अनुबन्ध गर्ने योजना बुनेको खबरमा उल्लेख छ ।
सन् २०१८ मा इंग्लिस क्लब साउथह्यामपटनबाट लिभरपुलमा अनुबन्ध भएका भान डाइकले देखाएको उत्कृष्ट प्रदर्शनबाट बार्सिलोना लोभिएको छ । पछिल्लो समय रक्षापंक्तिका कारण कमजोर बनिरहेको उसका लागि भान डाइक बलियो हतियार हुने उसले ठानेको छ ।
यता, रियल मड्रिडका जिनेदिन जिदानको योजनामा रियलले यसै समरमा मात्र नयाँ खेलाडी किन्न ३०० मिलियन युरो खर्चियो । तैपनि, जिदान बेर्नाबेउमा सुरक्षित छैनन् । प्रि–सिजन र सिजनका सुरुआती खेलको नतिजाबाट क्लब व्यवस्थापक उनीसँग सन्तुष्ट छैन ।
तैपनि, जिदान आगामी सिजन भान डाइकलाई सरुवा बजारमा प्रमुख मुद्दा बनाउने योजनामा छन् । ठूला उपाधिको रौनक फर्काउन जिदान अझै पनि टोलीमा एक स्टार डिफेन्डर र स्टार फरवार्डको खोजीमा छन् । जसमा भान डाइक र फ्रेन्च फरवार्ड केलियन एमबाप्पे मुख्य सूचीमा रहेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
प्रकाशित मिति ३० भाद्र २०७६, सोमबार ०९:५९